सूर्यको प्रकाशमा पाँच गुुणा कमी, वैज्ञानिक भन्छन्: कुनै तुफानअघिको शान्ति त होइन ? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठप्रविधिसूर्यको प्रकाशमा पाँच गुुणा कमी, वैज्ञानिक भन्छन्: कुनै तुफानअघिको शान्ति त होइन ?
काठमाण्डौ । वैज्ञानिकहरुका अनुुसार पृथ्वीको सबैभन्दा ठूलो उर्जाको स्रोतका रुपमा रहेको सुर्यको चमक हराइरहेको छ । वैज्ञानिकहरुले सूर्यको प्रकाशमा कमी आएको बताएका छन् । सूर्य, आकाशगंगामा रहेको सूर्य जस्तै अन्य ताराहरुको तुुलनामा कमजोर भएको छ । कमजोर पनि सामान्य मात्रै होइन कि अति नै कमजोर भएको छ ।
अब वैज्ञानिकहरु के कारणले यस्तो भइरहेको छ भनेर खोजमा जुटेका छन्। सूर्य पृथ्वीको उर्जाको एक्लो स्रोत हो । तर विगत ९ हजार वर्षदेखि सूर्य लगातार कमजोर भइरहेको छ । जर्मनीको म्याक्स प्ल्यांक इन्स्टीटीयुुटका अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरुका अनुुसार यसको चमकमा निरन्तर कमी आइरहेको छ । यो इन्स्टीच्यूटका वैज्ञानिकहरुले अमेरीकी अन्तरीक्ष एजेन्सी नासाको केपलर स्पेस टेलिस्कोपबाट प्राप्त आँकडाहरुको अध्ययन गरेपछि यस्तो खुुलासा गरेको हो ।
सूर्यमाथि प्रतिवेदन तयार गर्ने अर्का वैज्ञानिक टिमो रीनहोल्डले सूर्य केहि वर्षदेखि शान्त रहेको बताए । उनले यो गणना वैज्ञानिकहरुले सूर्यको सतहमा बन्ने सोलार स्पटका माध्यमबाट गर्ने गरेको बताए र उनका अनुुसार पछिल्लो केही वर्षदेखि सोलार स्पटको संख्यामा कमी आइरहेको छ । -द सनबाट भावानुवाद